50 cal bmg smoking pipe by 50calus 474 views
фотоальбом с картинками by NASTIA_090583 105 views
What to eat_what_not_to_eat by kathleenstiffler123 113 views
Tips And How To’s On Surrogacy by damianpole867 140 views
Tipi di annuncio by Giulio Fabbri 226 views
Studio gripphotos by 50calus 270 views
, Network and Supporting Coordinator at ISchool - Myanmar
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ႔ပါသည္...။
Ko Ye , Asst. Manager IT at Inya Lake Hotel, Yangon, Myanmar
1. ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ((((၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်ပြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်ပြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်ပြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၆၆၆၆၆၆၆၆ ။။။။)))) ၁၃၇၅၁၃၇၅၁၃၇၅၁၃၇၅ ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ သီတင်းက)တ်လဆန်းသီတင်းက)တ်လဆန်းသီတင်းက)တ်လဆန်းသီတင်းက)တ်လဆန်း ၄၄၄၄ ရက်ရက်ရက်ရက် ((((၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ခု ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလေအာက်တိုဘာလေအာက်တိုဘာလေအာက်တိုဘာလ ၈၈၈၈ ရက်ရက်ရက်ရက်)))) ပြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပြ 0ာန်းလိုက်သည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၁၁၁)))) အမည်၊အမည်၊အမည်၊အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြ င်း ှင့်သက်ဆိုင်ခြ င်း ှင့်သက်ဆိုင်ခြ င်း ှင့်သက်ဆိုင်ခြ င်း ှင့် အဓိပ3ာအဓိပ3ာအဓိပ3ာအဓိပ3ာယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက် ၁။ ဤဥပေဒကို ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ဟုေခ7တွင်ေစရမည်။ ၂။ ဤဥပေဒပါပြ 0ာန်းချက်များသည် - (က) ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်၏ ေမြ ထု၊ ေရထု၊ ေလထုတို= ပါဝင်ေသာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မည်သည့်ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲDအစည်း ှင့်မဆို သက်ဆိုင် ေစရမည်။ ( ခ ) ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်၏ ပြ င်ပေရာက် မည်သည့်အရပ်ေဒသ၌မဆို ရှိေနေသာ မြ န်မာ ိုင်ငံသားများ ှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။ ၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပ3ာယ် သက်ေရာက် ေစရမည်- (က) ဆက်သွယ်ေရးဆက်သွယ်ေရးဆက်သွယ်ေရးဆက်သွယ်ေရး (Telecommunication)(Telecommunication)(Telecommunication)(Telecommunication) ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဝါယာကQ ိAး၊ ဖိုင်ဘာကQ ိAး သို=မဟုတ် အခြ ားေသာ လRပ်ကူးကQ ိAး တစ်ခုခုကို အသုံးပြ A၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရဒီယိုလိUင်း၊ အလင်းတန်း၊ အခြ ားေသာ လRပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ထုတ်လတ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးပြ A၍ ေသာ်လည်းေကာင်း မူရင်းအတိုင်းဖြ စ်ေစ၊ ပြ Aပြ င်၍ဖြ စ်ေစ ထုတ်လင့်ခြ င်း သို=မဟုတ် ဖမ်းယူခြ င်းကိုဆိုသည်။ ( ခ ) သတင်းအချက်အလက်သတင်းအချက်အလက်သတင်းအချက်အလက်သတင်းအချက်အလက် ဆိုသည်မှာ အချက်အလက်၊ မူရင်းစာ၊ ပုံရိပ်သဏWာန်၊ အသံ၊ သေ Xကတ(Code)၊ လက[ဏာသေ Xကတ(Sign)၊ အချက်ပြ သေ Xကတ (Signal) ှင့် အချက်အလက်အစုအေဝး တစ်ရပ်ရပ်တို=အပြ င် ယင်းတို=တစ်ခုထက်ပို၍ ေပါင်းစည်း ထားေသာအရာများ ှင့် အလားတူကိစ^ရပ်များကိုဆိုသည်။ ( ဂ ) ကQ ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရးကQ ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရးကQ ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရးကQ ိAးမဲ့ဆက်သွယ်ေရး ဆိုသည်မှာ ထုတ်လင့်သည့် ကိရိယာ ှင့် ဖမ်းယူသည့် ကိရိယာတို=အက_ ားတွင် ဝါယာကQ ိAး၊ ဖိုင်ဘာကQ ိAး သို=မဟုတ် အခြ ားေသာ လRပ်ကူး
2.2ကQ ိAးတစ်ခုခုကို အသုံးမပြ Aဘဲ သတင်းအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေရဒီယိုလိUင်း၊ အလင်းတန်း၊ လRပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ် ထုတ်လတ်ခြ င်း သို=မဟုတ် အခြ ားနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် ထုတ်လင့်ခြ င်း သို=မဟုတ် ဖမ်းယူခြ င်းကို ဆိုသည်။ (ဃ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ တစ်ခုခုကိုအသုံးပြ Aပb ီး ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း၊ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း၊ ကွန်ပျcတာ၊ ကွန်ပျcတာ ကဲ့သို=ေသာ အလားတူပစ^ည်း၊ ယင်းတို= ှင့် တွဲဖက်အသုံးပြ A ိုင်သည့်စနစ် ှင့် ပစ^ည်း ကို ကQ ိAးဖြ င့်ဖြ စ်ေစ၊ ကQ ိAးမဲ့ဖြ စ်ေစ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aေသာ စနစ်ကို ဆိုသည်။ ( င ) အသုံးပြ Aသူဘက်ရှိအသုံးပြ Aသူဘက်ရှိအသုံးပြ Aသူဘက်ရှိအသုံးပြ Aသူဘက်ရှိ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း ကနဦး ချိတ်ဆက်သည့် ေနရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူတစ်ဦးဦးထံမှ သတင်းအချက် အလက်များ လက်ခံရရှိေသာ ေနရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသူထံသို= သတင်း အချက်အလက်ေပးပို=ေသာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း၏ ေနရာကိုေသာ် လည်းေကာင်းဆိုသည်။ ( စ ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်း၊ ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ှင့် အသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း များအနက် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကိုဖြ စ်ေစ၊တစ်ရပ်ထက်ပို၍ဖြ စ်ေစလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကိုဆိုသည်။ (ဆ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ပစ^ည်းတစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ထားရှိပb ီး ယင်းကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းကို ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိထားသူအား ငှားရမ်းခြ င်း သို=မဟုတ် အဆိုပါ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းအေပ7တွင် မိမိကိုယ်တိုင် ဝန်ေဆာင်မU ေပးသည့် လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။ ( ဇ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်ကို အပြ န်အလှန် ေပးပို=ေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် ဝန်ေဆာင်မUေပးသည့် လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အသုံးပြ Aသူဘက်ရှိ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် သက်သက်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်လုပ်ငန်းမပါဝင်။ (စျ) အသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်တစ်ခု သို=မဟုတ် တစ်ခုထက် ပိုေသာ ကွန်ရက်များကို အသုံးပြ A၍ ဝန်ေဆာင်မUေပးေသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းတွင် အသုံးပြ Aသူဘက်ရှိ ကွန်ရက်နယ်နိမိတ် သက်သက်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် လုပ်ငန်းမပါဝင်။
3.3(ည) ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအား အေထာက်အကူပြ Aရန်အလို=ငှာ ဝန်ကQ ီးဌာနက သီးခြ ားသတ်မှတ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းကို ဆိုသည်။ ( ဋ ) ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ခုခု ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေစျးကွက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ခုခု ှင့် တွဲဖက်အသုံးပြ Aရသည့် ပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မU ှင့် သက်ဆိုင် သည့် ေစျးကွက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်းဆိုသည်။ ( ဌ ) အချက်အလက်အေက_ ာင်းအရာအချက်အလက်အေက_ ာင်းအရာအချက်အလက်အေက_ ာင်းအရာအချက်အလက်အေက_ ာင်းအရာ ဆိုသည်မှာ ဖန်တီး ိုင်ေသာ၊ ပြ Aပြ င် ိုင်ေသာ၊ သိမ်းဆည်းထား ိုင်ေသာ၊ ပြ န်လည်ေဖာ်ထုတ် ိုင်ေသာ သို=မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ် နည်းပညာဖြ င့် ဆက်သွယ်ေပးပို= ိုင်ေသာ စာသား၊ အသံ၊ ပုံရိပ်ငb ိမ် ှင့် ပုံရိပ်ရှင် တို=ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းတို=ကို အခြ ားေသာ hုပ်သံဖြ င့် ပြ န်လည်ေဖာ်ပြ ခြ င်း၊ ထိေတွDခြ င်းဖြ င့် ေဖာ်ပြ ခြ င်း သို=မဟုတ် တစ်နည်း နည်းဖြ င့် ေပါင်းစပ်ေဖာ်ပြ ထားခြ င်း ကိုေသာ်လည်းေကာင်းဆိုသည်။ ( ဍ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြ Aသည့်hုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေခြ ခံအေဆာက်အအုံ၏ ပစ^ည်း တစ်ခုခုကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းပစ^ည်းများ ေပါင်းစပ်ထားရှိမUကိုေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။ ( ဎ ) လိUင်း Uန်းစk်လိUင်း Uန်းစk်လိUင်း Uန်းစk်လိUင်း Uန်းစk် ဆိုသည်မှာ ၃ ဟတ်ဇ်မှ ၄၂၀ တာရာဟတ်ဇ် လိUင်း Uန်း အထိ ပါဝင်သည့် စk်ဆက်မပြ တ်ေသာ လRပ်စစ်သံလိုက်လိUင်း၏ လိUင်း Uန်းစk်ကို ဆိုသည်။ (ဏ) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများတွင် ဆက်သွယ်ေခ7ဆိုမUအတွက် အသုံးပြ Aရန် သတ်မှတ်ေသာ ိုင်ငံေတာ်၏ ဆက်သွယ်ေရး နံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကို ဆိုသည်။ (တ) အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်လျာထားသတ်မှတ်ချက်လျာထားသတ်မှတ်ချက်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက် ဆိုင်ရာစနစ်များအက_ ား အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ရာတွင် အသုံးပြ Aရန် အက[ရာ သို=မဟုတ် ဂဏန်း သို=မဟုတ် အက[ရာ ှင့် ဂဏန်း ေပါင်းစပ်၍ အသုံးပြ Aေသာ အစီအစk်တကျ ေဖာ်ပြ သည့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကို ဆိုသည်။ (ထ) ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခုကို ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းတစ်မျိAးမျိAး လက်ဝယ်ထားရှိခြ င်း၊ အသုံးပြ Aခြ င်းအတွက် ထုတ်ေပးေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။
4.4( ဒ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခု အား ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုဆိုသည်။ ( ဓ ) လိုင်စင်လိုင်စင်လိုင်စင်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတစ်ခုခုအား ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားေသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ှင့် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။ ( န ) ဝန်ကQ ီးဌာနဝန်ကQ ီးဌာနဝန်ကQ ီးဌာနဝန်ကQ ီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ ဆက်သွယ်ေရး ှင့်သတင်းအချက် အလက်နည်းပညာဝန်ကQ ီးဌာနကို ဆိုသည်။ ( ပ ) ဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဝန်ကQ ီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ ဆက်သွယ်ေရးmန်က_ ားမUဦးစီး ဌာနကို ဆိုသည်။ ( ဖ ) အယူခံခုံhုံးအယူခံခုံhုံးအယူခံခုံhုံးအယူခံခုံhုံး ဆိုသည်မှာ ဝန်ကQ ီးဌာနက ချမှတ်သည့် အမိန်= သို=မဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို မေကျနပ်ပါက အယူခံဝင်ခွင့်ပြ Aရန် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDက ဖွဲDစည်းထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အယူခံခုံhုံးကို ဆိုသည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၂၂၂၂)))) ရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များ ၄။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- (က) ိုင်ငံေတာ်ေခတ်မီဖွံDဖb ိAးတိုးတက်ေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာဖြ င့် အေထာက် အကူပြ A ိုင်ရန်၊ ( ခ ) ဖွံDဖb ိAးတိုးတက်လာေသာ ဆက်သွယ်ေရးကnများတွင် ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ အခွင့်အလမ်း တူမRေသာ ပွင့်လင်းမြ င်သာသည့် ယှk်ပb ိAင်မUများ ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းဖြ င့် အရည်အေသွး မြ င့်မားပb ီး သုံးစွဲသူတို=အား ထိုက်တန်စွာ ဝန်ေဆာင်မUေပး ိုင်မည့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများ ေပ7ထွက်လာေစရန်၊ ( ဂ ) ဖွံDဖb ိAးတိုးတက်လာေသာ ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာ ှင့်အတူ ိုင်ငံေတာ် တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ဖြ န်=ကျက်ပb ီး အများပြ ည်သူ ဆက်သွယ် အသုံးပြ A ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာ ိုင်ေစရန်၊ (ဃ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်သူ ှင့် အသုံးပြ Aသူတို=ကို ဥပေဒ ှင့်အညီ အကာအကွယ်ေပး ိုင်ရန်၊
5.5( င ) ိုင်ငံေတာ်တည်ငb ိမ်ေအးချမ်းေရး ှင့် အများပြ ည်သူလုံခb Aံ ေရးကိစ^များ အတွက် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ ှင့် လိုင်စင် ရယူပb ီးမှသာ အသုံးပြ Aခွင့်ရှိေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းများကို ကQ ီးက_ ပ် ိုင်ရန်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၃၃၃၃)))) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ခွင့်တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ခွင့်တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ခွင့်တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၅။ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို တည်ေထာင်လုပ်ကိုင် လိုသည့် ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန ှင့် အဖွဲDအစည်းများသည် ခွင့်ပြ Aချက် ှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်- (က) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊ ( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၊ ( ဂ ) အသုံးချဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း။ ၆။ ဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်အတွက် ေရွးချယ် ခြ င်းဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့် စည်းမျk်းများကို အများသိရှိေစရန် ထုတ်ပြ န် ေက_ ညာေပးရမည်။ ၇။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅ အရ ေလRာက်ထားချက်ကို ပုဒ်မ ၆ အရ စိစစ်ပb ီး သေဘာထားမှတ်ချက် ဖြ င့် ဝန်ကQ ီးဌာနသို= တင်ပြ ရမည်။ ၈။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည်- (က) ပုဒ်မ ၇ အရ တင်ပြ ချက်ကိုရရှိသည့်အခါ ပြ ည်တွင်းမှ ေလRာက်ထားချက်ဖြ စ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက် ရယူရန် လိုအပ်ေသာလုပ်ငန်းအတွက် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက် ရယူ၍ေသာ် လည်းေကာင်း၊ ထိုသို= သေဘာတူညီချက်ရယူရန် မလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ကQ ီးဌာန၏ အဆုံးအဖြ တ်ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းတည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြ A ိုင်သည်။ ( ခ ) ပုဒ်မ ၇ အရ တင်ပြ ချက်ကို ရရှိသည့်အခါ ပြ ည်ပမှေလRာက်ထားချက်ဖြ စ်ပါက ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက်ရယူ၍ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းတည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြ A ိုင်သည်။ ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(က) ှင့် (ခ) အရ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြ Aသည့်အခါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၏ သက်တမ်းကို တစ်ကQ ိမ်လRင် အနည်းဆုံး ငါး ှစ်မှ အများဆုံး အ ှစ် ၂၀ အထိ လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြ Aသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးေရး အတွက် ဦးစီးဌာနသို= mန်က_ ားရမည်။
6.6(ဃ) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေခ7ဆိုမU၊ ချိတ်ဆက်မUတို=အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ပင်မဝင်ေပါက်ထွက်ေပါက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ေလRာက်ထားလာပါလRင် ပြ ည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲD၏ သေဘာတူညီချက်ရယူပb ီး ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် သီးခြ ားသတ်မှတ် ထားသည့် စည်းမျk်း၊ စည်းကမ်းများ ှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြ A ိုင်သည်။ ( င ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးေပးရန် ေလRာက်ထားချက်ကို ဦးစီးဌာနက စိစစ် တင်ပြ လာလRင် သက်တမ်းတိုးရန် ခွင့်ပြ Aေပး ိုင်သည်။ ၉။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ဝန်ကQ ီးဌာန၏ mန်က_ ားချက် ှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန ှင့် အဖွဲDအစည်း များအား သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ေပး ရမည်။ ၁၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဥပေဒ ှင့်အညီ ပြ ည်တွင်း၊ ပြ ည်ပ၊ ပုဂ@ိAလ်ဌာနအဖွဲDအစည်း များ ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ ၁၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိထားသည့် အခြ ားသူတစ်ဦးဦး ှင့် ေအာက်ပါ ကိစ^ရပ်များအတွက် သေဘာတူစာချAပ် ချAပ်ဆို၍ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည် - (က) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအချင်းချင်း ဤဥပေဒအခန်း (၁၂)ပါ ပြ 0ာန်းချက် များ ှင့်အညီ ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း ှင့် အပြ န်အလှန် ဆက်သွယ်ခြ င်း၊ ( ခ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ပစ^ည်းများကို ခွဲေဝအသုံးပြ Aခြ င်း၊ ( ဂ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် သီးခြ ားေဖာ်ပြ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြ ားကိစ^ရပ်များေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ ၁၂။ (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် လိုပါက သက်တမ်းတိုးမြ rင့်ေပးရန် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်။ ( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် ေလRာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပb ီး ဝန်ကQ ီးဌာန၏ခွင့်ပြ Aချက်ဖြ င့် လုပ်ငန်း လိုင်စင်သက်တမ်းကို တိုးမြ rင့်ေပး ိုင်သည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၄၄၄၄)))) ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင် ၁၃။ ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန ှင့် အဖွဲDအစည်းများသည် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရယူပb ီးမှသာ အသုံးပြ Aရန် ဝန်ကQ ီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း တစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ထားရှိလိုလRင်ဖြ စ်ေစ၊ အသုံးပြ AလိုလRင်ဖြ စ်ေစ လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်
7.7များ ှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်။ သို=ရာတွင် ေအာက်ပါတို=အတွက် ဆက်သွယ်ေရး ပစ^ည်းဆိုင်ရာလိုင်စင် ေလRာက်ထားရန်မလို- (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက မိမိအသုံးပြ Aရန် ဝယ်ယူရင်း ှီးထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး ပစ^ည်းကို လက်ဝယ်ထားရှိခြ င်း ှင့် အသုံးပြ Aခြ င်း၊ ( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူထံမှ ရယူထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းကို လက်ဝယ်ထား ရှိခြ င်း ှင့် အသုံးပြ Aခြ င်း။ ၁၄။ ဦးစီးဌာနသည်- (က) ပုဒ်မ ၁၃ အရ သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းအတွက် လိုင်စင်ေလRာက်ထားချက် ကို စိစစ်ပb ီး လိုင်စင်ထုတ်ေပးခြ င်း သို=မဟုတ် ငြ င်းပယ်ခြ င်း ပြ A ိုင်သည်။ ( ခ ) လိုင်စင်ထုတ်ေပးရာတွင် စည်းကမ်းချက်များ ှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းကို တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ေပးရမည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၅၅၅၅)))) လိုင်စင်ရရှိသူ၏လိုင်စင်ရရှိသူ၏လိုင်စင်ရရှိသူ၏လိုင်စင်ရရှိသူ၏ တာဝန်များတာဝန်များတာဝန်များတာဝန်များ ၁၅။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်- (က) ဤဥပေဒ ှင့် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန်=ေက_ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်= ှင့် mန်က_ ားချက်များကို လိုက်နာရမည်။ ( ခ ) လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ ( ဂ ) လိုင်စင်ခ၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြ rင့်ခ၊ အသုံးပြ Aခ၊ ဝန်ေဆာင်ခ တို=အပြ င် နည်းပညာ အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချိန်အခါလိုအပ်ချက်အရေသာ်လည်းေကာင်း ေကာက်ခံမည့် အခေက_ းေငွများကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေပးေဆာင်ရမည်။ (ဃ) သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျင့်စk်များ ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မU စံချိန်စံmန်း များကိုလည်းေကာင်း၊ ဝန်ကQ ီးဌာန ှင့်ဦးစီးဌာနတို=၏ mန်က_ ားချက်များကိုလည်းေကာင်း လိုက်နာရမည်။ ( င ) လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း သို=မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် ခြ င်းေက_ ာင့် ဖြ စ်ေပ7လာေသာ အကျိAးဆက်များ ှင့် စပ်လျk်း၍ ိုင်ငံေတာ်တွင် ထိခိုက်နစ်နာမUမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၁၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူသည် - (က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ခွင့်ပြ Aထားသည့် လိUင်း Uန်းစk်လျာထားချက် ှင့်အညီ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
8. 8 ( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရရှိေသးသည့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို တိုးချဲDလုပ်ကိုင်လိုလRင်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ ှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုလRင်ဖြ စ်ေစ၊ ပူးေပါင်း၍လုပ်ကိုင်လိုလRင်ဖြ စ်ေစ အခန်း (၃)ပါ ပြ 0ာန်းချက် များ ှင့်အညီ ခွင့်ပြ Aချက် ှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထပ်မံရယူရမည်။ ( ဂ ) အခြ ားဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအား စက်မUပိုင်းဆိုင်ရာအရ အေ ှာင့်အယှက် ပြ Aေက_ ာင်း စစ်ေဆးေတွDရှိချက်အရ သို=မဟုတ် အေက_ ာင်းက_ ားချက်အရ လိုအပ်သည့် မွမ်းမံပြ င်ဆင်မUများ ေဆာင်ရွက်ေစရန်ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ် အား ယာယီရပ်ဆိုင်းေစရန်ဖြ စ်ေစ mန်က_ ားသည့်အခါ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၁၇။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိ၏ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်လင့် ေသာ သို=မဟုတ် ဖမ်းယူေသာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အေက_ ာင်းအရာများ ှင့် သုံးစွဲသူ ပြ ည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ လRိA=ဝှက်ထားရှိရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို လုံခb Aံ စွာ ထိန်းသိမ်း ထားရှိပb ီး တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ ခွင့်ပြ Aထားသည့်ကိစ^မှအပ သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိသူအား ထုတ်ေဖာ် အသိေပးခြ င်းမပြ Aရ။ ၁၈။ ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရရှိသူသည်- (က) မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် ဆက်သွယ်ေရးစက်ပစ^ည်းများအား လိုင်စင်တွင် သတ်မှတ် ေပးထားသည့် ေနရာ၌သာ ထားရှိအသုံးပြ Aရမည်။ ( ခ ) လိုင်စင်အရ မိမိအား အသုံးပြ Aခွင့်ေပးထားသည့် ဆက်သွယ်ေရးစက်ပစ^ည်းမှတစ်ဆင့် ိုင်ငံေတာ်၏လုံခb Aံ ေရးကို မထိခိုက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။ ( ဂ ) မိမိအသုံးပြ Aသည့် စက်ပစ^ည်းများ ှင့် စပ်လျk်းပb ီး ဦးစီးဌာနမှ mန်က_ ားချက်များ အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၆၆၆၆)))) လိUင်း Uန်းစk် ှင့်လိUင်း Uန်းစk် ှင့်လိUင်း Uန်းစk် ှင့်လိUင်း Uန်းစk် ှင့် ဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်းတည်ေနရာတို=ကိုဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်းတည်ေနရာတို=ကိုဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်းတည်ေနရာတို=ကိုဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်းတည်ေနရာတို=ကို စီမံခန်=စီမံခန်=စီမံခန်=စီမံခန်=ခွဲခြ င်းခွဲခြ င်းခွဲခြ င်းခွဲခြ င်း ၁၉။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လိUင်း Uန်းစk်ကိုလည်းေကာင်း၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ဗင်းရှင်းများ ှင့်အညီ ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အား ခွဲေဝသတ်မှတ် ေပးထားေသာ ဂb ိAဟ်တုပတ်လမ်းေက_ ာင်း တည်ေနရာကိုလည်းေကာင်း စီမံခန်=ခွဲခြ င်း ှင့် ကQ ီးက_ ပ်ခြ င်း တို=ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၂၀။ ဦးစီးဌာနသည် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လိUင်း Uန်းစk် လျာထားချက်ပါ လိUင်း Uန်းခွင်များအား ပုဂ@ိAလ်၊ ဌာန ှင့် အဖွဲDအစည်းများထံသို= စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ အသုံးပြ Aခွင့်ေပး ိုင်သည်။
9.9အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၇၇၇၇)))) ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် ှင့်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ှင့်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ှင့်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာအီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားလျာထားလျာထားလျာထား သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက် ၂၁။ ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကQ ီးဌာနက အတည်ပြ Aထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် လျာထားသတ်မှတ်ချက် ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်တို=ကို လိုက်နာအသုံးပြ Aရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူအား mန်က_ ားရမည်။ ၂၂။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအတွက် မိမိ၏ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUတွင် အသုံးပြ Aရန် ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ်များ ှင့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာများကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်ပb ီး အသုံးပြ Aခွင့်ေပး ိုင်သည်။ ၂၃။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက ဆက်သွယ်ေရးနံပါတ် ှင့် အီလက်ထေရာနစ် လိပ်စာတို=ကို ပုဒ်မ ၂၁ အရ mန်က_ ားချက် ှင့်အညီ အသုံးပြ Aခြ င်း ရှိ မရှိ စစ်ေဆးခြ င်း ှင့် ကQ ီးက_ ပ်ခြ င်းတို=ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၈၈၈၈)))) နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံmန်းများနည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံmန်းများနည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံmန်းများနည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံmန်းများ ၂၄။ ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်များ ှင့် စပ်လျk်း၍ လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ စံချိန်စံmန်းများကို ဝန်ကQ ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြ န်ထားရမည်။ ၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံmန်းများကို လိုင်စင်ရရှိသူများက လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရန် ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲရမည်။ ၂၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပြ ည်တွင်းသို=တင်သွင်းခြ င်း၊ ပြ ည်ပသို=တင်ပို=ခြ င်း ပြ A ိုင်ရန်အတွက် ကွန်ရက် အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း ှင့် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း အမျိAးအစားများ၏ စံချိန်စံmန်းကို သတ်မှတ် ရမည်။ ၂၇။ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း တစ်မျိAးမျိAးကို ထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ ေရာင်းချခြ င်း သို=မဟုတ် ဖြ န်=ချိခြ င်း ပြ Aလုပ်လိုသူသည် မိမိထုတ်လုပ်ခြ င်း၊ ေရာင်းချခြ င်း သို=မဟုတ် ဖြ န်=ချိခြ င်းပြ Aမည့် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း အမျိAးအစား၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံmန်းေထာက်ခံချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဦးစီးဌာနသို= ေလRာက်ထားရမည်။ ၂၈။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံmန်း ေထာက်ခံချက်ေလRာက်ထားလာခြ င်းကို စိစစ်ပb ီး ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးခြ င်း သို=မဟုတ် ငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ A ိုင်သည်။
10. 10 အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၉၉၉၉)))) အသုံးပြ Aသူကိုအသုံးပြ Aသူကိုအသုံးပြ Aသူကိုအသုံးပြ Aသူကို အကာအကွယ်ေပးခြ င်းအကာအကွယ်ေပးခြ င်းအကာအကွယ်ေပးခြ င်းအကာအကွယ်ေပးခြ င်း ၂၉။ (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းတစ်ခုခု ှင့် စပ်လျk်း၍ ေဆာင်ရွက်ဆဲဝန်ေဆာင်မUအတွက်ဖြ စ်ေစ၊ ေဆာင်ရွက်မည့် ဝန်ေဆာင်မUအသစ်အတွက် ဖြ စ်ေစ အဆိုပြ Aသည့်ဝန်ေဆာင်ခ Uန်းထားကို ဦးစီးဌာနသို= တင်ပြ ရမည်။ ( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် အဆိုပြ Aတင်ပြ သည့် ဝန်ေဆာင်ခ Uန်းထားများကို စိစစ်ပb ီး ဝန်ကQ ီး ဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ခွင့်ပြ Aေပးရမည်။ ၃၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်- (က) ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ပြ Aေပးထားေသာ ဝန်ေဆာင်ခ Uန်းထား ှင့်အညီ ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ ( ခ ) ခွင့်ပြ Aေပးထားေသာ ဝန်ေဆာင်ခ Uန်းထားကို ပြ င်ဆင်ေပြ ာင်းလဲခြ င်း သို=မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်းပြ Aလုပ်လိုပါက ဦးစီးဌာန၏ ကQ ိAတင်ခွင့်ပြ Aချက် ရယူပb ီးမှ ေဆာင်ရွက် ရမည်။ ၃၁။ (က) ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ှင့် စပ်လျk်း၍ အသုံးပြ Aသူကို အကာအကွယ် ေပးသည့် စံ Uန်းများကို ဝန်ကQ ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။ ( ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် အသုံးပြ Aသူကို အကာအကွယ်ေပးသည့် စံ Uန်းများ ှင့် အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ အအအအခန်းခန်းခန်းခန်း ((((၁၁၁၁၀၀၀၀)))) ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း ှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း ှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း ှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း ှင့် အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းအပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းအပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းအပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်း ၃၂။ ဦးစီးဌာနသည် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ပစ^ည်းများ ှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း၊ အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းတို= ှင့် စပ်လျk်းသည့် ကိစ^ရပ်များအတွက် လိုအပ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ရမည်။ ၃၃။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေသာ အခြ ားသူတစ်ဦးအား ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်အေထာက် အကူပြ Aပစ^ည်းများ ှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း ှင့် အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းတို= ပြ Aလုပ် ိုင်ရန် ေတာင်းဆိုလာလRင် ယင်းတို=အချင်းချင်း သေဘာတူညီချက် ှင့် ဦးစီးဌာန၏ အတည်ပြ Aချက်တို=ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
11. 11 ၃၄။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်းက မိမိ၏ကွန်ရက်အတွင်း ဝင်ေရာက်ချိတ်ဆက် အသုံးပြ A ခွင့်ပြ Aရာ၌ - (က) သာတူညီမRမUရှိေစပb ီး ခွဲခြ ား ှိမ့်ချမUမရှိေစရ၊ ကွန်ရက်အတွင်းရှိ မူလဝန်ေဆာင်မU အရည်အေသွး စံချိန်စံmန်းေအာက် နိမ့်ကျမUမရှိေစရ။ ( ခ ) အရည်အေသွးစံချိန်စံmန်းတို=ကို လိုအပ်ချက်အရ ဦးစီးဌာနက စစ်ေဆးလRင် စစ်ေဆးမUကို ခံယူရမည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၁၁၁၁၁၁၁)))) ပb ိAင်ဆိုင်မUကိုဆန်=ကျင်သည့်ပb ိAင်ဆိုင်မUကိုဆန်=ကျင်သည့်ပb ိAင်ဆိုင်မUကိုဆန်=ကျင်သည့်ပb ိAင်ဆိုင်မUကိုဆန်=ကျင်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်လုပ်ေဆာင်ချက်လုပ်ေဆာင်ချက်လုပ်ေဆာင်ချက်များအားများအားများအားများအား တားမြ စ်ခြ င်းတားမြ စ်ခြ င်းတားမြ စ်ခြ င်းတားမြ စ်ခြ င်း ၃၅။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ေရးေစျးကွက်အတွင်း လွတ်လပ်စွာပb ိAင်ဆိုင်မU သေဘာသဘာဝကိုပျက်ပြ ားေစသည့် မည်သည့်လုပ်ေဆာင်မUမျိAးကိုမR လုပ်ေဆာင်ခြ င်းမပြ Aရ။ ၃၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါကိစ^ရပ်များ ှင့် စပ်လျk်းပb ီး ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦး၊ ဌာန သို=မဟုတ် အဖွဲDအစည်းတို= ှင့် နားလည်မUရယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ သေဘာတူညီမUရယူခြ င်း၊ အစီအစk် များပြ Aလုပ်ခြ င်း သို=မဟုတ် စာချAပ်ချAပ်ဆိုခြ င်းများ မပြ Aလုပ်ရ- (က) မိမိဆ yအတိုင်း Uန်းထားပြ င်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ( ခ ) ပb ိAင်ဆိုင်မUကို ေလျာ့နည်းေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ေစျးကွက်အား ခွဲေဝရယူရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ( ဂ ) ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်းေထာက်ပံ့သူ၊ ေရာင်းချသူတစ်ဦးဦးထံမှ ဝယ်ယူခြ င်းမပြ Aရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ (ဃ) မိမိပb ိAင်ဘက်တစ်ဦးဦးအား မတရားေသာ နည်းလမ်းဖြ င့် ဆန်=ကျင်မUပြ Aခြ င်း။ ၃၇။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိထံမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားသူတစ်ဦးထံမှေသာ် လည်းေကာင်း ဆက်သွယ်ေရးပစ^ည်း သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUကိုသာ ရယူသုံးစွဲေရးအတွက် အသုံးပြ Aသူ အား ချAပ်ချယ်ကန်=သတ်ခြ င်းမပြ Aရ။ ၃၈။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၇ တို=တွင် တားမြ စ်ထားေသာ ဆက်သွယ်ေရး ေစျးကွက်အတွင်း ပb ိAင်ဆိုင်မUကိုဟန်=တားသည့် လုပ်ေဆာင်မUများဖြ စ်ေပ7လာပါက ဝန်ကQ ီးဌာန၏ သေဘာတူခွင့်ပြ Aချက်ရယူကာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူကို ယင်းလုပ်ေဆာင်မUများကို ရပ်စဲရန် mန်က_ ား ိုင်သည်။
12. 12 အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၂၁၂၁၂၁၂)))) စစ်ေဆးခြ င်း ှင့်စစ်ေဆးခြ င်း ှင့်စစ်ေဆးခြ င်း ှင့်စစ်ေဆးခြ င်း ှင့် ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်းကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်းကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်းကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း ၃၉။ ဦးစီးဌာနသည် - (က) ဤဥပေဒပါပြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ကQ ီး ဌာန၏ လမ်းmန်ချက် ှင့်အညီ စီမံခန်=ခွဲခြ င်း ှင့် ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်းတို=ပြ Aရမည်။ ( ခ ) လိုင်စင်ရယူထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းများကို လည်းေကာင်း၊ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ဆက်သွယ်ေရး ပစ^ည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း စစ်ေဆးခြ င်း ှင့် ကQ ီးက_ ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း တို=ကိုေဆာင်ရွက်ရမည်။ ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရစစ်ေဆးခြ င်းအတွက် လိုအပ်ပါက သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ@ိAလ်များဖြ င့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲDကို ဖွဲDစည်း၍ လဲအပ်တာဝန်ေပး ိုင်သည်။ ၄၀။ ဤဥပေဒပါပြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- (က) ဦးစီးဌာနသည်- (၁) လိုအပ်ေသာ ပုဂ@ိAလ်များကို ေခ7ယူေမးမြ န်းခြ င်း၊ လိုအပ်ေသာ သတင်း အချက်အလက် ှင့် အေထာက်အထားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ ှင့် စာတမ်း အမှတ်အသားများကို တင်ပြ ေစခြ င်းတို=ကို ပြ A ိုင်သည်။ (၂) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်သည့် အေဆာက်အအုံ ှင့် ေနရာများ၊ စက်ပစ^ည်းများကို ဝင်ေရာက်က_ ည့်hUစစ်ေဆးခြ င်း ပြ A ိုင်သည်။ (၃) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ှင့် စပ်လျk်း၍ စာရင်းဇယား ှင့် စာရွက် စာတမ်းများ၊စာတမ်းအမှတ်အသားများကို က_ ည့်hUစစ်ေဆးခြ င်း၊ ေကာက် ုတ် ချက်ရယူခြ င်း ှင့် မိတzcကူးခြ င်းတို=ကို ပြ A ိုင်သည်။ (၄) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ ှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ပြ Aစု ထားရှိခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းခြ င်းတို= ှင့် စပ်လျk်း၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ေပး ိုင်သည်။ ( ခ ) ပုဒ်မ ၃၉ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ဖွဲDစည်းသည့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲDသည် ဦးစီးဌာန၏ လဲအပ် တာဝန်ေပးချက်အရ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂) ှင့် (၃) တို=ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့် များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
13. 13 အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၃၁၃၁၃၁၃)))) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း၊တပ်ဆင်ခြ င်း၊တပ်ဆင်ခြ င်း၊တပ်ဆင်ခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းခြ င်း ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း ှင့် ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်းပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်းပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်းပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း ၄၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ် ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း ပြ Aလုပ် ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာေမြ ှင့် အေဆာက်အအုံ ပိုင်ရှင် သို=မဟုတ် ယင်းေမြ ှင့် အေဆာက်အအုံကို စီမံခန်=ခွဲခွင့်ရှိသူ ှင့် ညrိ ိUင်း၍ ကာလသတ်မှတ်ချက် ပါဝင်ေသာ ှစ်ဦး ှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိသည့် ေနရာတွင် ေအာက်ပါ တို=ကို ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်- (က) လုပ်ငန်းေမြ ေနရာမှာ သင့်ေလျာ်မUရှိ မရှိ ေရွးချယ်ဆုံးဖြ တ် ိုင်ရန်အလို=ငှာ ယင်းေနရာ သို= ဝင်ေရာက်ခြ င်း၊ စစ်ေဆးက_ ည့်hUခြ င်း၊ တိုင်းတာခြ င်း၊ အနိမ့်အမြ င့် မှတ်တမ်းယူခြ င်း၊ ေမြ နမူနာရယူခြ င်း၊ ကျင်းတူးခြ င်း၊ အေပ7ယံေမြ လာကို စစ်ေဆးခြ င်းတို=အပါအဝင် အခြ ားလိုအပ်ေသာကိစ^များကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အလို=ငှာ အဆိုပါ ေမြ ေပ7ေမြ ေအာက်၊ ေရေပ7ေရေအာက်တွင် လိုအပ်ေသာ ကွန်ရက် အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများကို ေနရာချထားခြ င်း၊ ထားရှိခြ င်း၊ တပ်ဆင်ခြ င်း၊ ချိတ်ဆက်ခြ င်း ှင့် ပစ^ည်း လုံခb Aံ ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ( ဂ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများကိုဝင်ေရာက်က_ ည့်hUစစ်ေဆးခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်း ထားရှိခြ င်း ှင့် ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း။ ၄၂။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၄၁ ပါ လုပ်ငန်းကိစ^များေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူညီမU ရရှိထားသည့်ေမြ ှင့် အေဆာက်အအုံပိုင်ရှင် ေပြ ာင်းလဲမUဖြ စ်ေပ7ပါက အဆိုပါေမြ ှင့် အေဆာက်အအုံ တွင် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ် ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်းတို=ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက် သေဘာတူညီမUရယူထားရမည်။ ၄၃။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်း ခြ င်း၊ ပြ Aပြ င်မွမ်းမံခြ င်း၊ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း ှင့် ဖယ်ရှားခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အများပြ ည်သူ အသုံးပြ Aသည့်လမ်း သို=မဟုတ် ယာk်လမ်းေက_ ာင်း သို=မဟုတ် ေရလမ်းေက_ ာင်း သို=မဟုတ် ေလလမ်းေက_ ာင်း တို=ကို အေ ှာင့်အယှက် သို=မဟုတ် အဟန်=အတား မဖြ စ်ေစရ။ ၄၄။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ် ဖယ်ရှားခြ င်းတို=အား ပြ Aလုပ်ရန်အလို=ငှာ ကQ ိAတင်ေလ့လာ ဆန်းစစ်မUများအတွက် ပိုင်ရှင်အား ကQ ိAတင်အသိေပးခြ င်းမရှိဘဲ မည်သည့်ေမြ ေနရာကိုမR ဝင်ေရာက်ခြ င်းမပြ Aရ။
14. 14 ၄၅။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ တပ်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခြ င်းပြ Aလုပ်ရာတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမUနည်းပါးေစရန် လိုအပ်သည့် ကQ ိAတင်ကာကွယ်မU များကို လုပ်ေဆာင်ရမည်။ ၄၆။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိ၏ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်း တပ်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ် ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံခြ င်းပြ Aရာတွင် ေပါ့ေလျာ့ခြ င်း သို=မဟုတ် တမင်ပျက်ကွက်ခြ င်းေက_ ာင့် တစ်ဦး တစ်ေယာက်ေသာ သူအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေစခြ င်း၊ ေသဆုံးခြ င်း သို=မဟုတ် ပစ^ည်းတစ်စုံတစ်ရာ ပျက်စီးဆုံးhUံးေစခြ င်းဖြ စ်လRင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ သို=မဟုတ် နစ်နာသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူထံမှ သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ ေလျာ်ေက_ းရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။ ၄၇။ ဤဥပေဒအရလိုင်စင်ရရှိသူသည် လမ်းမကQ ီး၊ လမ်း၊ ရထားလမ်း၊ မြ စ်၊ တူးေမြ ာင်း၊ အခြ ားေသာ ေရလမ်း၊ ေရသွင်းစိုက်ပျိAးေရးစနစ်၊ ေရေမြ ာင်း၊ ေရေပးေရးစနစ်၊ ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်း လုပ်ငန်း သို=မဟုတ် အခြ ားေသာအများပြ ည်သူ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် သို=မဟုတ် ပုဂ@လိက ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်ေစ ိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း ှင့် ေမြ ေပ7ေမြ ေအာက်တို=တွင် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများကို အသုံးပြ Aပb ီး ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းအတွက် ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ A ပစ^ည်းများထူေထာင်ခြ င်းပြ Aရာတွင် လူ ှင့် ပစ^ည်းတို=၏ လုံခb Aံ ေရးကို အေလးဂhုပြ A၍ ဥပေဒ ှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၄၈။ ဦးစီးဌာနသည် ေဆာက်လုပ်ဆဲ သို=မဟုတ် ေဆာက်လုပ်ပb ီး အေဆာက်အအုံ ှင့် ေမြ ကွက် အတွင်း ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မU သို=မဟုတ် ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ရက်တစ်ခုခု အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလRင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေဆာက်အအုံ ှင့် ေမြ ကွက်အတွင်းရှိ ကွန်ရက် ဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း၏ အရည်အေသွးအား မြ rင့်တင်ေပးရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလRင်ေသာ် လည်းေကာင်း - (က) အရင်းအ ှီးစိုက်ထုတ်သူသို=မဟုတ် အေဆာက်အအုံ ှင့် ေမြ ပိုင်ရှင်အား ၄င်း၏ အေဆာက်အအုံအတွင်း သို=မဟုတ် အေပ7တွင်ဖြ စ်ေစ၊ ေမြ ကွက်တွင်ဖြ စ်ေစ ကွန်ရက် အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း တပ်ဆင် ိုင်ေရး အတွက် ေနရာေပးရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲDအစည်းတို= ှင့် ညrိ ိUင်း၍ ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။ ( ခ ) သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းကို တပ်ဆင် ေပးရန် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအား mန်က_ ား ိုင်သည်။ ( ဂ ) ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ ဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့် စရိတ် ေငွေက_ းများကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက အားလုံးဖြ စ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ဖြ စ်ေစ ကျခံရန် mန်က_ ား ိုင်သည်။
15. 15 ၄၉။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများ၏ ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ တပ်ဆင်ခြ င်းတို=တွင် မလိုအပ်ဘဲ ဘnာေငွေက_းကုန်ကျမUမရှိေစရန် ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မUများကို စီမံခန်=ခွဲေပး ိုင်သည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၄၁၄၁၄၁၄)))) အငြ င်းပွားမUများကိုအငြ င်းပွားမUများကိုအငြ င်းပွားမUများကိုအငြ င်းပွားမUများကို ေဖြ ရှင်းခြ င်းေဖြ ရှင်းခြ င်းေဖြ ရှင်းခြ င်းေဖြ ရှင်းခြ င်း ၅၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများသည်- (က) ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ကွန်ရက်အေထာက် အကူပြ Aပစ^ည်းများ ဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင်ဖြ စ်ေစ အငြ င်းပွားမUေပ7ေပါက် သည့်အခါ အချင်းချင်းညrိ ိUင်းေဖြ ရှင်း ိုင်ခြ င်း မရှိပါက ထိုအငြ င်းပွားမUကို ဦးစီးဌာန သို= တင်ပြ ိုင်သည်။ ( ခ ) ကွန်ရက်ဝန်ေဆာင်မU လုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်အေထာက်အကူပြ Aပစ^ည်းများ ှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြ Aခြ င်း၊ အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ င်းတို= ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အငြ င်းပွားမU ေပ7ေပါက်ပါကဦးစီးဌာနသို= တင်ပြ ိုင်သည်။ ၅၁။ ဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူအချင်းချင်း အငြ င်းပွားမU ှင့် စပ်လျk်း၍ ေစ့စပ် ညrိ ိUင်းဆုံးဖြ တ်ေပးရန် ပုဒ်မ ၅၀ အရ တင်ပြ ချက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထိုသို=တင်ပြ ခြ င်းမရှိ ေသာ်လည်း အငြ င်းပွားမUမှာ အများပြ ည်သူအကျိAးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာေစ ိုင်လRင်ေသာ်လည်းေကာင်း ေစ့စပ်ညrိ ိUင်းဆုံးဖြ တ်ေပးရမည်။ ၅၂။ (က) ပုဒ်မ ၅၁ အရ ဦးစီးဌာနက ေစ့စပ်ညrိ ိUင်းဆုံးဖြ တ်ေပးချက် ှင့် စပ်လျk်း၍ မေကျနပ် သူသည်- (၁) ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာနည်းပညာ ှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ^ဖြ စ်ပါက ထိုဆုံးဖြ တ်ချက် ချမှတ်သည့် ေန=ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀အတွင်း ဝန်ကQ ီးဌာနသို= အယူခံ ိုင်သည်။ (၂) ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာ ှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိသည့်ကိစ^ဖြ စ်ပါက မိမိ၏နစ်နာမUအတွက် သက်သာခွင့် ှင့် အခွင့်အေရးများကိုရရှိရန် တည်ဆဲ ဥပေဒများအရ သက်ဆိုင်ရာ တရားhုံးတွင် ေတာင်းဆို ိုင်သည်။ ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)အရ အယူခံခြ င်းအေပ7 ဝန်ကQ ီးဌာနသည်- (၁) လိုအပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမUများ ပြ Aလုပ်ရမည်။ (၂) ဦးစီးဌာန၏ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို အတည်ပြ Aခြ င်း၊ ပြ င်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်း ပြ A ိုင်သည်။
16. 16 ( ဂ ) ဝန်ကQ ီးဌာန၏ ဆုံးဖြ တ်ချက် ှင့်စပ်လျk်း၍ မေကျနပ်သူသည် ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်သည့် ေန=မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၄၅ ရက်အတွင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ှင့် အညီ အယူခံခုံhုံးသို= အယူခံ ိုင်သည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၅၁၅၁၅၁၅)))) အများပြ ည်သူအကျိAးငှာအများပြ ည်သူအကျိAးငှာအများပြ ည်သူအကျိAးငှာအများပြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွးေနရာေဒသမေရွးေနရာေဒသမေရွးေနရာေဒသမေရွး အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးအေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးအေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးအေခြ ခံဆက်သွယ်ေရး လိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်ချက်ကို ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဖြ ည့်ဆည်းခြ င်း ၅၃။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည် ပြ ည်ေထာင်စုသမ:တမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU များကို ကျယ်ကျယ်ပြ န်=ပြ န်=ရယူသုံးစွဲခွင့်ရရှိေစရန်အတွက် ိုင်ငံအတွင်းရှိ အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရး ဖွံဖb ိAးတိုးတက်မUနိမ့်ကျေနေသးသည့် နယ်ေမြ ေဒသများ (underserved area) တွင် အေခြ ခံ ဆက်သွယ်ေရး အေဆာက်အအုံ တိုးချဲDတည်ေဆာက် ိုင်ေစရန် ှင့် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မU ပိုမို ကျယ်ပြ န်=ေကာင်းမွန်ေစ ိုင်မည့် အစီအစk်များချမှတ်ရန် ဦးစီးဌာနအား mန်က_ ား ိုင်သည်။ ၅၄။ ဝန်ကQ ီးဌာနသည် အများပြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရး လိုအပ်ချက်ကို ဖြ ည့်ဆည်းေရးအစီအစk်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်အတွက် အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးလိုအပ်ချက် ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ထူေထာင် ထားရှိပb ီး ရန်ပုံေငွကို ကQ ီးက_ ပ်ရမည်။ ၅၅။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၄ အရ တည်ေထာင်ထားသည့် ရန်ပုံေငွကို အသုံးပြ A၍ အများ ပြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးလိုအပ်ချက်ကို ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းအစီအစk်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကQ ီးက_ ပ်ရမည်။ ၅၆။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၅ ပါ ေအာက်ပါအစီအစk်များ ချမှတ် ိုင်ေရးအတွက် ဝန်ကQ ီးဌာန၏ အတည်ပြ Aချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ရမည် - (က) ဆက်သွယ်ေရးဖွံDဖb ိAးတိုးတက်မU နိမ့်ကျေနေသးသည့် နယ်ေမြ ေဒသများကို သတ်မှတ်ခြ င်း၊ ( ခ ) အများပြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာေဒသမေရွး အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရး လိုအပ်ချက်ကို ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် (universal target) ချမှတ်ခြ င်း၊ ( ဂ ) လိုင်စင်ရသူများမှ လိုက်နာဖြ ည့်ဆည်းေပးရမည့် အများပြ ည်သူအကျိAးငှာ ေနရာ ေဒသမေရွး အေခြ ခံဆက်သွယ်ေရးလိုအပ်ချက်ကို ဖြ ည့်ဆည်းခြ င်းဆိုင်ရာ တာဝန် ဝတzရားများ (universal service obligation) သတ်မှတ်ခြ င်း။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၁၁၁၆၆၆၆)))) စီမံခန်=ခွဲစီမံခန်=ခွဲစီမံခန်=ခွဲစီမံခန်=ခွဲေရးနည်းလမ်းအရေရးနည်းလမ်းအရေရးနည်းလမ်းအရေရးနည်းလမ်းအရ အအအအေရးယူခြ င်းေရးယူခြ င်းေရးယူခြ င်းေရးယူခြ င်း ၅၇။ ဦးစီးဌာနသည် လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လRင် ဖြ စ်ေစ၊ အခန်း(၅)ပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၃၈ အရ mန်က_ ားချက်ကိုဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ
17. 17 ၅၁ အရ ဦးစီးဌာန၏ ေစ့စပ်ညrိ ိUင်း ဆုံးဖြ တ်ချက်ကိုဖြ စ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၅၂ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဝန်ကQ ီးဌာန၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်ကိုဖြ စ်ေစ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လRင်ေသာ်လည်းေကာင်း ထိုသူအား ေအာက်ပါစီမံခန်=ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်=တစ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ် ိုင်သည် - (က) သတိေပးခြ င်း၊ ( ခ ) လိုင်စင်ကို ကာလအကန်=အသတ်ဖြ င့် ရပ်ဆိုင်းခြ င်း၊ ( ဂ ) လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ ၅၈။ (က) ဦးစီးဌာနက ပုဒ်မ ၅၇ အရ ချမှတ်ေသာ စီမံခန်=ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန်= တစ်ရပ်ရပ် ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန်=ချမှတ်သည့်ေန=ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကQ ီး ဌာနသို= အယူခံ ိုင်သည်။ ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အယူခံခြ င်းအေပ7 ဝန်ကQ ီးဌာနသည်- (၁) လိုအပ်ပါက စုံစမ်းစစ်ေဆးမUများ ပြ Aလုပ် ိုင်သည်။ (၂) ဦးစီးဌာန၏ အမိန်=ကိုအတည်ပြ Aခြ င်း၊ ပြ င်ဆင်ခြ င်း သို=မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်း ပြ A ိုင်သည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၇၁၇၁၇၁၇)))) အယူခံခုံhုံးဖွဲDအယူခံခုံhုံးဖွဲDအယူခံခုံhုံးဖွဲDအယူခံခုံhုံးဖွဲDစည်းခြ င်း၊စည်းခြ င်း၊စည်းခြ င်း၊စည်းခြ င်း၊ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊ က_ ားနာခြ င်း ှင့်က_ ားနာခြ င်း ှင့်က_ ားနာခြ င်း ှင့်က_ ားနာခြ င်း ှင့် ဆုံးဖြ တ်ခြ င်းဆုံးဖြ တ်ခြ င်းဆုံးဖြ တ်ခြ င်းဆုံးဖြ တ်ခြ င်း ၅၉။ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDသည် - (က) ဝန်ကQ ီးဌာန၏ ဤဥပေဒအရ ချမှတ်သည့် အငြ င်းပွားမUအေပ7 စီမံခန်=ခွဲမUဆိုင်ရာ ဆုံးဖြ တ်ချက်များ ှင့် စပ်လျk်း၍ နစ်နာသူက တင်ပြ လာသည့်အခါတွင် ထပ်မံ၍ အယူခံ ိုင်ခွင့်ရရှိေစမည့် အယူခံခုံhုံးကို ဖွဲDစည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ ( ခ ) အယူခံခုံhုံးကို ဥက•0အပါအဝင် အဖွဲDဝင် ကိုးဦးထက်မပိုေသာ အဖွဲDဝင်များဖြ င့် ဖွဲDစည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ ၆၀။ အယူခံခုံhုံးဥက•0 ှင့် အဖွဲDဝင်များသည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများ ှင့် ပြ ည့်စုံရမည် - (က) အယူခံခုံhုံး ဥက•0သည် တိုင်းေဒသကQ ီး သို=မဟုတ် ပြ ည်နယ်တရားလတ်ေတာ် တရားသူကQ ီးအဖြ စ် အနည်းဆုံး ငါး ှစ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သို=မဟုတ် တိုင်းေဒသကQ ီး သို=မဟုတ် ပြ ည်နယ်အဆင့်ထက် မနိမ့်ေသာ တရားေရးအရာရှိ သို=မဟုတ် ဥပေဒ အရာရှိ ရာထူးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူ ဖြ စ်ရမည်။ ( ခ ) အယူခံခုံhုံးအဖွဲDဝင်များသည် ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်၊ ဥပေဒပညာရပ်၊ စီးပွားေရးပညာရပ်တို= ှင့် စပ်လျk်း၍ ထင်ေပ7ေကျာ်က_ ားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိ ေသာ က)မ်းကျင်သူပညာရှင်များ ဖြ စ်ရမည်။
18. 18 ၆၁။ (က) အယူခံခုံhုံးသည် က_ ားနာမည့်ေန=ရက်ကို ကQ ိAတင်ေက_ ညာ၍ သတ်မှတ်သည့် ေန=ရက်တွင် က_ ားနာရမည်။ ( ခ ) တင်ပြ ချက် ှင့်စပ်လျk်း၍ သက်ဆိုင်ရာတို=၏ ေလRာက်လဲချက်ကို က_ ားနာ ိုင်သည်။ ( ဂ ) အပb ီးသတ်ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ေဆာလျင်စွာ ချမှတ် ိုင်ရန် စီစk်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ (ဃ) အယူခံခုံhုံး၏ အပb ီးသတ်ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို ဥက•0အပါအဝင် အဖွဲDဝင်ထက်ဝက်ေကျာ်၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ချမှတ်ရမည်။ ၆၂။ အယူခံခုံhုံး၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် အပb ီးအပြ တ်အတည်ဖြ စ်သည်။ ၆၃။ အယူခံခုံhုံး ဥက•0 ှင့် အဖွဲDဝင်များသည် ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDက သတ်မှတ်သည့် စရိတ် ှင့် ချီးမြ rင့်ေငွများကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ၆၄။ အယူခံခုံhုံး၏ သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲDစည်းသည့်ေန=မှ ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲDသို= အပb ီးသတ် ဆုံးဖြ တ်ချက် အစီရင်ခံစာ တင်ပb ီးသည့် ကာလအထိသာ ဖြ စ်သည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း ((((၁၁၁၁၈၈၈၈)))) ပြ စ်မU ှင့်ပြ စ်မU ှင့်ပြ စ်မU ှင့်ပြ စ်မU ှင့် ပြ စ်ဒဏ်များပြ စ်ဒဏ်များပြ စ်ဒဏ်များပြ စ်ဒဏ်များ ၆၅။ မည်သူမဆို ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မUလုပ်ငန်းကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ကိုင်ေက_ ာင်း ပြ စ်မUထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလRင် ထိုသူအား ငါး ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ပြ င် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ် ိုင်သည်။ ၆၆။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပြ Aလုပ်မUတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျcးလွန်ေက_ ာင်းပြ စ်မUထင်ရှား စီရင်ခြ င်း ခံရလRင် ထိုသူအားသုံး ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်- (က) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်အတွင်းသို= ယင်း၏ပိုင်ရှင် သို=မဟုတ် စီမံခန်=ခွဲခွင့်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြ Aချက်မရှိဘဲ ဝင်ေရာက်ေ ှာင့်ယှက်ခြ င်း၊ စံချိန်စံmန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုဖြ စ်ေစ၊ မူလအေနအထားကိုဖြ စ်ေစ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း သို=မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြ င်း၊ ( ခ ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးေစရန်ရည်ရွယ်၍ ဗိုင်းရပ်စ် သို=မဟုတ် အခြ ားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြ င့် ဝင်ေရာက်ေစခြ င်း၊ ( ဂ ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တစ်ခုခုကို အသုံးပြ A၍ ေငွေက_းှင့် ပစ^ည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ခိုးယူခြ င်း၊ လိမ်လည်ခြ င်း၊ အလွဲသုံးစားပြ Aခြ င်း သို=မဟုတ် အကျိAးပျက်စီးေစခြ င်း၊ (ဃ) ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တစ်ခုခုကို အသုံးပြ A၍ ပုဂ@ိAလ်တစ်ဦးဦးအားေခြ ာက်လှန်= ေတာင်းယူခြ င်း၊ အ ိုင်အထက်ပြ Aခြ င်း၊ မတရားတားဆီးကန်=ကွက်ခြ င်း၊ အသေရဖျက် ခြ င်း၊ေှာင့်ယှက်ခြ င်း၊ မေလျာ်သ_ ဇာသုံးခြ င်း သို=မဟုတ် ခb ိမ်းေခြ ာက်ခြ င်း။
фотоальбом с картинками
What to eat_what_not_to_eat
Tips And How To’s On Surrogacy
Myanmar Govt. education policy (Draft)